MAYELANA - Uhambo
MAYELANA NE-HVTN 702
IYINI I-HVTN 702
I-HVTN 702 iwucwaningo olukhulu lokusebenza oluhlola inhlanganisela yemithi emibili yokugomela i-HIV esavivinywa. Imithi yokugoma yocwaningo ibizwa nge-ALVAC-HIV (vCP2438) ne-Bivalent Subtype C gp120/MF59. Izinhloso eziyinhloko zalolu cwaningo yilezi:
Imithi yokugoma esetshenziswa kulolu cwaningo ayenziwanga nge-HIV ephilayo, i-HIV ebulewe, izingxenye ezithathwe ku-HIV, noma amaseli abantu anegciwane le-HIV. Imithi yokugomela i-HIV ehlolwayo yenziwa ngamakhophi okwenziwa (enziwe umuntu) ezingxenye ze-HIV. Ngakho-ke, imithi yokugoma NGEKE idale i-HIV noma ingculaza.
Imithi yokugoma yocwaningo isavivinywa. Lokhu kusho ukuthi sisayicwaninga futhi sisaqhubeka sifunda ukuthi iphephe kangakanani ukuyisebenzisa kubantu nokuthi ingalivimba yini igciwane le-HIV.
Lemithi yokugoma isetshenziselwa ucwaningo kuphela. Ayitholakali ukuthi isetshenziswe emphakathini jikelele noma ukuthi idayiswe. Le mithi yokugoma ihlinzekwa abenzi bayo, i-Sanofi Pasteur ne-GlaxoSmithKline (GSK).
NGITSHELENI KABANZI NGE-HVTN 702 NANGE-UHAMBO
Uhambo uchungechunge locwaningo olusiholela ekutholeni umuthi wokugomela i-HIV ophephile nosebenzayo. I-HVTN 702 iwucwaningo lwakamuva ochungechungeni lwe-Uhambo. Uhambo luyindlela, futhi sisohambweni lokuthola umuthi wokugoma ophephile nosebenzayo ozovikela abantu ku-HIV.
Olunye ucwaningo olukhulu ngo-2009 lwabonisa ngokokuqala ngqa ukuthi umuthi wokugoma ungayinqanda i-HIV, yize amathuba emancane. Lolo cwaningo kwakuthiwa i-RV144 futhi lwenziwa e-Thailand ngabantu abangaphezu kwa-16,000. Leyo miphumela yayijabulisa, futhi yabonisa ukuthi umuthi wokugoma wavimbela abangu-31.2% ekungenweni yigciwane le-HIV. Lokhu kusho ukuthi imikhiqizo yocwaningo eyasetshenziswa ocwaningweni i-RV144 yakwazi ukunqanda igciwane le-HIV cishe kumuntu oyedwa kwabathathu ababamba iqhaza ocwaningweni. Yize lokhu kwakunganele ukuthi kukhishwe ilayisensi yemithi yokugomela, ucwaningo lwanika ososayensi izimpawu nolwazi ababeludinga ukuze bathake imithi yokugoma engcono. Saqala kanjalo-ke kulolu hambo, ngokuqala ngocwaningo oluncane olwalubheka ukuphepha komuthi wokugoma owawusavivinywa kubantu abaNsundu kanye nendlela amasosha omzimba asabela ngayo kuwo, futhi manje sesiku-HVTN 702.
Olulodwa kulolu cwaningo oluncane lwaziwa ngokuthi i-HVTN 100. Imithi yokugoma i-ALVAC ne-Protein esetshenziswa ku-HVTN 702 inikezwe abantu abangu-210 eNingizimu Afrika ocwaningweni okuthiwa i-HVTN 100. I-HVTN 100 iyisivivinyo sesigaba 1/2a lapho abacwaningi befuna khona ukuthola ukuthi ingabe imithi yokugoma i-ALVAC ne-Protein (imithi yokugoma efanayo esetshenziswa ku-HVTN 702) iphephile yini ukuyinika abantu; ukuthi abantu bayakwazi yini ukwamukela imithi yokugoma yocwaningo ngaphandle kokuphatheka kabi; nokuthi amasosha omzimba abantu asabela kanjani emithini yokugoma yocwaningo i-ALVAC ne-Protein. Imiphumela yesikhashana ye-HVTN 100 ibonise ukuthi lemithi yokugoma emibilii iphephile ukuyinika abantu futhi iwaphatha kahle amasosha omzimba. Azikho izinkinga ezinkulu zempilo ezake zavela ezihlobene nale mithi yokugoma. Kodwa-ke, kuhlale kunethuba lokuthi kuvele izinkinga ezingakabonakali okwamanje. Yingakho enye inhloso yalolu cwaningo iwukuhlola ukuthi ingabe le mithi yokugoma iphephile uma inikwa abantu abaningana. Impilo yombambiqhaza ngamunye izonakekelwa ngokucophelela kulo lonke ucwaningo. I-HVTN 702 ihlukile ku-HVTN 100 ngokuthi ku-HVTN 702, abacwaningi sebefuna ukwazi ukuthi ingabe imithi yokugoma i-ALVAC ne-Protein ingalivimbela yini igciwane le-HIV.
Lolu cwaningo lwenziwa yi-HIV Vaccine Trials Network (i-HVTN). I-HVTN nayo yonke imitholampilo yocwaningo eneqhaza zisebenza ngokubambisana nomphakathi ukuze kuqinisekwe ukuthi lolu cwaningo luyamukeleka emphakathini wendawo futhi luhlonipha amasiko endawo.